Dagaal xalay ka dhacay duleedka Laascaanood iyo Saamaynta Xukuumada Siiranyo | lughayanews
Dagaal xalay ka dhacay duleedka Laascaanood iyo Saamaynta Xukuumada Siiranyo
Posted on January 19, 2013 by lugta
Laascaanood (Lughaya) Iska hor imaad socday muddo 15 daqiiqo ah ayaa xalay saqdii dhexe duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku dhex maray ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidamo ka mar qaata maamulka Khaatumo.
Iska hor imaadka oo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ayaa qaar ka tirsan dadka deegaanka waxay Bar-kulan u sheegeen in la isku adeegsaday rasaasta ka dhacda qoryaha culus iyo kuwa fudud, waxaana dhawaqa rasaasta laga maqlayay xaafadaha Laascaanood.
Mas’uuliyiinta maamullada Somaliland iyo Khaatumo weli kama aanay hadlin iska hor imaadka.
Ciidamadda maamulka Khaatumo ayaa maalmihii la soo dhaafay fariisimo ka sameystay deegaanno ka tirsan gobolka Sool.
sikastaba ha ahaatee dhawaan ayuun bay ahayd markii hogaamiyihii hore ee jabhada SSC Mr xaglotoosiye loo magacaabay wasiirka wasaarada ganacsiga oo uu jagadaa si hore u ahayey wasiir ka soo jeeda su aashu hada waxa ay tahay xukuumada Siilaanyo ma waxa ay dhiiri galisaa kolba cida dagaal gasha ?
« Damac Beesha Ciise iyo Duur (Diirada lughaya) Xaflada xilwareejinta golahii 5aad ee dalada dhalinyarda Somaliland ee SONYO »